Articles - Warqad Furan: Buurmadow, waxan weydiinayaa, "Qiime intee leeg bay kuugu fadhidaa weedhani?"
Warqad Furan: Buurmadow, waxan weydiinayaa, "Qiime intee leeg bay kuugu fadhidaa weedhani?"
16 Feb, 2008 - Warqad Furan: Buurmadow, waxan weydiinayaa, "Qiime intee leeg bay kuugu fadhidaa weedhani?"
Ummadda Somaliyeed waxay leedahay dhaqan wanaagsan, dhaqan ay tixgeliso, dhaqan is-ixtraam iyo kala dambeyn leh., dhaqan maamul oo madax iyo mijo kala leh, dhaqan lama taabtaan ah oo qof walba tixgeliyo, dhaqan ay ku kala badbaadaan oo soo jireen ah. Bulsho kastaa oo meel degeni, waxay doorataa nin madax-dhaqameed ah oo hogaamiya bulshadaas. Isna waxu doortaa guddi guurti ah oo kala talisa gudo iyo debedba, waana maamulayaasha dhaqanka reer-guuraaga ee hawsha qabta, waxay fadhiyadooda ku qabsadaan golaha geedka hoostiisa. Madax-dhaqameedku waxu go�aamiyaa talada guddigu gaadho oo keli ah. Madax dhaqameedku waa tiir ka mid ah tiirarka la qadariyo.. Madax dhaqameedku waxu leeyahay hawl gaar ah. Waa nin dhexdhexaad u ah dadka u madaxa u yahay. Waa nin ilaaliya sharafta u huwan yahay oon ku milmin loolanka siyaasadda. Waxa nasiib darro ah dhaqan-guurka ku dhacay Somalida . waxa baaba�ay qiyamkii iyo hab-maamuuskii la kala lahaa . Waxan aad ula yaabnay hadal dhawaan ka soo yeedhay Buurmadow ee ahaa, � Silanyo hadduu mar dhacay, doorkan ha ka hadho doorashaa!� Buurmadow, waxan weydiinayaa, �Qiime intee le�eg bay kugu fadhidaa weedhani?� Koonfurta yamani , markay xorriyadda u dagaalamaysey, waxa magaalada Cadan yimid nin wasiir ah oo ka tirsan dowladda Ingiriiska. Waxu wasiirku la shiray baarlamaanka dalka u yimid, kuwaas oo afhayeen ka dhigtay nin Somali ah oo la odhan jirey Saciid laangadhe. Saciid Ingiriiskai ayuu si xun u caayey oo wax walba kula hadlay. Wasiirkii intu qoslay ayuu Sacid ku yidhi,, �Saciidow nin fiican baad tahaye, odhaahdaasi intee bay kugu joogtaa? Saciid baa lagu qoslay. waxu ka xanaaqay Sy�aasha i wasiirku Jawaabta uga dhigay. Waxay noqotay hal- ku-dheg caan ah oo ia adeegsado marku qof ku hadlo wax aan laaiqiisa ahayn. Saciid aakhirkii weedhaas hal ku dhegga noqotay ayuu Cadan uga doofay. Hadaba, Buurmadowow, ogow meel kasta ood tagto waxa ku horyaal, �Intee bay kugu joogtaa? Maah-maah Carbeed baa tidhaa, �Ninka gala wax annu shaqo ku lahayn,waxu la kulmaa wax annu raali ka ahayn.� Kelmedda kaa soo baxday, ma ahayn murti madax-dhaqameed, mana ahayn milgihii u ka mudnaa halyeyga, naftii huraha Axmed maxamed maxamoud (Silaanyo)� Axmed, waxa madaxa u sudhan baal dahab ah. Waxu ku mutaystay taariikhdii halganka xoraynta dalka hooyo. Qof kasta oo daacad ah, muwaadin ah Somaalilandmimada jecel oo rumaysani, waxu ogyahay in Axmed yahay laba jeer badbaadiyaha Somaliland. Marka hore, Axmed waxu hogaamiyey halgankii ummadda iyo mujaahidiinteedii dalka ka xorraysay keli-taliyaha. Mar labaaddna waxu dalka ka badbaadiyey burbur ka iman lahaa qaabkay doorashadu u dhacday. Waxannu dadweynuhu si cad ugu bogaadiyey sidu Axmed Arrintaa ka yeelay. Ka warran hadduu Amed yeeli lahaa sidu Odinga ka yeelay dalkiisa Kenya? Halkee buu dalkeennu maanta joogi lahaa? Amed waxu doortay danka dalkiisa iyo dadkiisa halku ka dooran lahaa dantiisa abaal baanu ugu haynaa Axmed. Sidaa ayuu Axmed ku mutaystay inu noqdo laba jeer badbaadiyaha dalkeenna Somaliland. Ducale Maxamed Xirsi